Abanye Abakhiqizi Nabahlinzeki Bempahla | China Others Factory
Izingxenye zensimbi zedayimane zokusika noma ukugaya ukhonkolo namatshe
Izingxenye zensimbi zedayimane ezisetshenziselwa ukusika noma ukugaya ukhonkolo namabhulokhi amatshe.Yenziwe ngefomula eyingqayizivele. Izinhlayiya zedayimane zinamandla amakhulu, inani eliphezulu, ukumelana nokugqoka okubukhali nokuphila isikhathi eside. Izingxenye zensimbi zitholakala ezinhlobonhlobo zobunjwa nobukhulu, ama-mortars nama-adhesives angenziwa ngokwezifiso.
3″ Ez Shintsha i-HTC Resin Pad Adaptha
I-adaptha ye-HTC EZ yokushintshwa ngokushesha kwamaphedi okupholisha inhlaka emishinini ye-HTC. Ingaguqulwa isetshenziswe emishinini eminingi ehlukene yokugaya nokupholisha. I-nylon quilt yenzelwe ukunamathela ngokuqinile esikhumbeni, futhi ngeke yonakaliswe izinyembezi eziphindaphindiwe. Elula, esebenza kahle futhi eyongayo.
I-Carbide Bush Hammer Roller Bits yezindawo zamatshe nezokhonkolo
I-Carbide Bush Hammer Roller Bits eyendawo yamatshe kanye ne-ConcreteUkwenza indawo engaphezulu ibe mahholo futhi ingasheleli, njenge-litchi finishing surface.Ingagugi kakhulu nempilo ende.Inolaka futhi iyasebenza.Isisekelo samarola esando asehlathini singenziwa ngokuxhuma okuhlukile ingene emishinini ehlukene.
Amathuluzi Edayimane Lavina Bush Hammer Roller Plate For Concrete Granite Stone
Amarola e-Diamond Bush Hammer okwenza indawo yaphansi ibe nzima futhi Engasheleli, njenge-litchi finishing surface. Ingakwazi ngepuleti noma ngaphandle kwayo. Senza amarola esando asehlathini ahlukene azo zonke izinhlobo zamapuleti emishini yokugaya, njenge-Lavina, i-Husqvarna, i-HTC, i-Terrco njll. Siphinde futhi sinikeze ngezinsizakalo zokwenza ngokwezifiso.
IMarble Granite Concrete Diamond Corner Grinding Bit Tools for Corner Grinder
Amathuluzi okulola amakhona edayimane asetshenziselwa ukulola amakhona, izitebhisi, ngaphansi kwamakhabethe, amajika, imiphetho ecijile e-beveled, njll. Afanele ukugaya zonke izinhlobo zephansi likakhonkolo nezindawo zamatshe.Ukunemba okuphezulu kokugaya kwenza ikhwalithi yangaphezulu ibe ngcono ngemva kokwelashwa.Ukugaya ngokushesha, ukusebenza kokugaya okuphezulu.